Indlu entsha ilala 4!
Ifulethi elitofotofo labantu abane, elitsha nelinemibala. nge balcony kwigumbi lokulala.
Ndirenta indawo eZimeleyo kwaye intle kakhulu yalungiswa kwakhona.
Imalunga ne-65 square metres ububanzi, inekhitshi, igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo, igumbi elineebhedi ezimbini, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokugcina.
*Iirhafu ( iva 10%)
*Amashiti ebhedi, kuquka namaqweqwe
I-Aggius imalunga nemizuzu engama-45 ukusuka kwizibuko nakwisikhululo seenqwelomoya saseOlbia (malunga neekhilomitha ezingama-50).
UAggius ukwimeko entle yokufikelela kuzo zonke iindawo ezintle nezidumileyo
Malunga neyure kumntla weSardinia: Archipelago of La Maddalena, Costa Smeralda, S. Teresa di Gallura, Castelsardo. ICorsica kunye neBonifacio malunga neeyure ze-2. Kude kufuphi nendlu unokufumana iivenkile, iinkonzo, kunye nayo yonke into onokuthi uyifune ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kwaye kuphumle ngokusemandleni.
Ukuba unombuzo okanye ufuna ulwazi oluthe kratya, zive ukhululekile ukuqhagamshelana nam.
Ibhedi enkulu eyi-1, 1 ibhedi elala abantu ababini, iisofa eziyi-2
4.36 · Izimvo eziyi-12
I-AGGIUS yidolophu enabemi be-1,643 kwiphondo lase-Olbia-Tempio, kummandla wembali waseGallura. UAggius ungomnye wamandulo weGallura, iimitha ezingama-500 ngaphezu kolwandle. Ngaphambi kweLimbara enamandla kunye nasemva, ikhonkco leentaba elicacileyo elenza ukuba lihluke kwaye linike umbono okhethekileyo. Amaqela kunye neenduli zegranite eziqengqelekayo zinika iimpawu ezibalaseleyo zommandla wayo kwimbonakalo yomhlaba. Iindawo zokundwendwela. Ilizwe libonelela ngeendawo ezininzi zokutyelela. Okokuqala, indawo ejikeleze idolophu ngokukhawuleza, iincopho zayo zegranite ezindala "iintaba ze-Agghju zazo," amahlathi angenakubalwa, iiThafa eziMkhulu zaMatye kumgama oziikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwiziko, ngelixa le mithombo mibini ikwilali yokusela amanzi kunye namatsha aqinisekisiweyo ane-diuretic. iipropathi, ichibi le "Holy Worthy" indlela ebukekayo kunye nokunye.
Diplomata al Liceo Artistico A. Frattini di Varese, Laureata a pieni voti in Pittura 110, all’Accademia delle Belle Arti “Brera” di Milano, diploma di Multimedia Art Director presso l’ “Acof” di Busto Arsizio. Artista. She graduated from the Art School A. Frattini of Varese, graduated with honors in Painting 110, Academy of Fine Arts "Brera" in Milan, Diploma in Multimedia Art Director at the '"ACOF" Busto Arsizio. Artist
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Aggius